संभावना भएर पनि चितवनका पर्यटन ब्यवशायीले बिर्सेको आकर्षक स्थल ‘मौलाकालिका’ :: NepalPlus
उत्तरतिर हेर्दा अन्नपूर्ण हिमालको श्रिंखलामात्रै होइन मनास्लु हिमालसम्म आँखै अगाडि उभिए जस्तो लाग्छ । धार्मिक स्थल देवघाट, त्यसको छेउको हरियो जंगल र त्रिब्रेणी । त्रिशुली, मादी र मर्स्याङ्दीको मिलनबिन्दुको द्रिष्य हेरेर अघाईन्न । दक्षिणतिर हेर्दा चितवनको बस्ति मात्रै होइन नारायणीको पूल र भरतपुर विमानस्थलसम्म छर्लङ्गै देखिन्छ । मौलाकालिका नारायणघाट बजारबाट नजिकै छ, पुग्न कुनै असुबिधा छैन । डेढ घण्टापनि लाग्दैन मौलाकालिकाको शिरमा पुग्न । धार्मिक स्थल भएकाले यहाँको ऐतिहाशिक र धार्मिक महत्वपनि छँदै छ । टुप्पोमा पुगेर पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको लोभ्याउने द्रिष्य हेर्दा त्यहाँबाट फर्किन मन् लाग्दैन । नेपालीहरु त यतिबिघ्न आकर्षित हुन्छन् । बिदेशी पर्यटक झन कति रमाउँदा हुन् ? तरपनि चितवनकै पर्यटकिय स्थलको सूचीमा पर्यटन ब्यवशायीले किन यसलाई समेट्न नसकेका ?
गत आइतवार हामीलाई अवशर जुर्‍यो, मौलाकालिकाको भ्रमण गर्ने । साथमा थिए, एन आर एन एका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष जिवा लामिछाने, मौलाकालिका मन्दिरका पूजारी, खेम लामिछानेपनि । मध्यान्हको चर्को घाम र उकाला सिँढीहरु उक्लिँदै जानुपर्ने । पसिनाले निथ्रुक्कै पार्‍यो । हरियो जंगल, बाटामा तिर्थालुहरुको बाक्लो उपस्थिति । फलफूल र जुसका पशल । तिर्थालुहरुका अनेक क्रियाकलाप हेर्दै हामी करिब दुई घण्टामा मौलाकालिका मन्दिरमा पुग्यौं ।
पर्यटकिय आकर्षणकालागि चाहिने करिब सबै सुविधा रहेछ । फराकिला सिँढी । यात्रुकालागि ठाउँ ठाउँमै विश्रामस्थल । पिउने पानीको धारो । चिया पसल । मन्दिरहरुको राम्रो ब्यवस्थापन । मौलाकालिका मन्दिर जहाँ छ त्यो पहाडको शिर रहेछ । पाँच सय मिटर त्यसको उचाई । त्यहाँबाट चितवको नारायणघाट, भरतपुर लगायतका शहर अनि अन्य वस्ति एखिने । नवलपरासी जिल्लाका केहि गाउँपनि हेर्न पाइने । भरतपुरको विमानस्थल र नारायणी नदीको बहाव, नदी माथिको पूल । उता उत्तरतिर हिमाल र पूर्वतिर देवघाट हेर्न कस्ट गर्नै नपर्ने । दुई घण्टा हिँडेको थकान र गर्मीको पेलान सबै भुलिने रहेछ, त्यहाँबाट चारैतिर फर्केर लोभलाग्दो द्रिष्य हेर्दा । नेपालीहरुको भिड रहेछ ।
मौलाकालिका मन्दिर ब्यवस्थापन समितिले गज्जबको काम गरेको रहेछ । धार्मिक प्रवचन र भजन किर्तनकालागि ब्यवस्थित हल । रात बस्न मन गर्नेकालागि सफा, फराकिला कोठा । तिभित्रै नुहाउने र चर्पीको ब्यवस्थासहित । खान खानकालागि भान्छाकोठाको सुविधा । यहाँ पर्यटकलागि चाहिने न्युनतम सुबिधा सबै छ । मध्यम खालको होटेलले दिनसक्ने खालको सुविधासहितको ।
यस्तो मनोरम द्रिष्य हेर्न पर्यटकहरु लालायित हुन्छन् । तर किन यहाँ नेपालीहरु मात्रै जान्छन् त ? यसको पर्याप्त प्रचारप्रसार भएकै छैन । संसार घुमिहिँड्ने एन आर एन ए का पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछानेपनि यो स्थलकाबारेमा केहि वर्ष अघिसम्म जानकार रहेनछन् । ‘म चितवनकै भएरपनि यो स्थलबारे जानकारि पाएको केहि वर्ष मात्रै भयो । यसको पर्याप्त चर्चा हुनै सकेको छैन’ लामिछानेले सुनाए ।
यसलाई प्रचारप्रसार गर्न सक्ने हो भने यसको संभावना छ । किनभने हिमाल रुचाउने पर्यटकदेखि भूद्रिष्य हेर्न रुचाउने र धार्मिक पर्यटनमा चासो राख्नेसम्मलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । पन्छी अवलोकनकर्ताकालागिपनि यहाँको वन उत्तिकै आकर्षक बन्न सक्छ । किनकि यहाँ अलि गर्मी, समथरमा बस्न रुचाउने र अलि पहाडतिर बस्ने दुबै खाले चरा पाइन्छन् ।
(सबै फोटो- ददि सापकोटा)